Diyaarado dagaal oo duqeeyay fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Jilib – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ka imaanaya degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay duqeeyeen saldhigyo ururka Al-Shabaab uu ku lahaa degaano ka tirsan degmadaasi.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in duqeynta diyaaradaha Kenya ay sababtay qasaare baaxad leh oo soo gaaray dagaalyahanada Al-Shabaab iyo dad rayid ah, inkasta oo aan la soo sheegin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta.
Dagaalyahanada Shabaab ayaa la sheegay inay xireen waddooyinka soo gala saldhiga, si an loo arkin qasaaraha ka soo gaaray duqeyntaasi, ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga waxyeellada ka dhalatay duqeeyntaasi.
Al-Shabaab ayaa xilligan waxaa soo wajahay culuskii ugu darnaa, kadib markii uu bilowday howlgalka Badweynta Hindiya oo loogala wareegay inta badan magaalooyinkii ay gacanta ku hayeen.